State Counsellor welcomes new Indian, Hungarian, Australian, Swiss Ambassadors – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar separately received the newly appointed Ambassadors to Myanmar: Mr. Saurabh Kumar of India, Mr. Szilveszter Bus of Hungary, Ms. Andrea Faulkner of Australia and Mr. Tim Enderlin of Switzerland, on3April 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw.
During the meeting, they cordially exchanged views on matters pertaining to the promotion of bilateral relations, enhancement of cooperation in areas such as education, agriculture, trade and investment, water management as well as in the international fora.
(၃-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မကြာသေးမီက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးများအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရသော အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဆော်ရက်(ဘ်) ကူးမား၊ ဟန်ဂေရီသံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဆေးလ်ဗက်စတာ ဘတ်စ်၊ သြစတြေးလျသံအမတ်ကြီး မစ္စ အင်ဒရီရာ ဖော့ခ်နာနှင့် ဆွစ်ဇာလန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ တင်မ် အန်ဒါလင်တို့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃ ရက်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရေး၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ရေအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကဏ္ဍများအပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။